ဇာတ်ကားအပေါ် သူ့ရဲ့ အမြင်လေးကို ပြောပြထားပါတယ်။
ဇဏ်ခီကတော့ မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ သူကြည့်ခဲ့သမျှ မြန်မာဇာတ်ကားတွေနဲ့ ကွာခြားမှု ရှိတဲ့အကြောင်းကို အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း မကြာခင်မှာ Now & Ever ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Photo: Me Fb
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီက '' မီ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ပိုင်းက ဖက်ရှင်တွေနဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မီ ဇာတ်ကားအတွက်လည်း ဆုတောင်းစကား ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
'' ကြည့်ဖူးသမျှမြန်မာကရိုက်တဲ့မြန်မာကားတွေထဲမှာ production level အမြင့်ဆုံးကားလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Camera work, lighting, color, sound, costume, makeup အကုန်လုံး ပိရိ သေသပ်ပြီး ခေတ်နှောင်းကိုပြန်သွားထားတာ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ Victoria Production, Director ဏကြီး နှင့်တကွ "မီ" team ကြီးတစ်ခုလုံး Congratulations!! I'm so proud of you all. ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ပါစေ'' ဆိုပြီးတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီ ၃ မိနစ်က သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo: Zenn kyi Fb
မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ဏကြီး က ပုံဖော်ရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီး ဗစ်တိုးရီးယား ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ရဲအောင်၊ မင်းဦး၊ သားညီ၊ နေတိုး၊ အောင်ရဲထိုက် နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့ကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကွင်း တည်နေရာကိုတော့ ရန်ကုန်၊ ပြင်ဦးလွင် နဲ့ ဖိုးကျား ဆင်စခန်းတို့မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇဏ်ခီဟာ အခုချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူရိုက်ကူးပြီးခဲ့တဲ့ ဥပါယ်တံမျဉ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျခဲ့လို့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာလည်း Central Base Productions က ထုတ်လုပ်မယ့် Now & Ever ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေ တယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်ကြမယ့် သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ဇဏ်ခီနဲ့ အတူ တခြား နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်များ၊ သရုပ် ဆောင် သစ်တွေကလည်း ပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။